မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် - Yangon Media Group
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် လူဦးရေ ၈ဝဝဝ ခန့် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြောင်း ဦးဆောင်သူအဖွဲ့အစည်းများထံမှသိရသည်။ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းထာဝရရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ဧပြီ ၂၂ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့ပါဝင်ခဲ့ကြကာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေစဉ်တွင် ”မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းရေး”၊ ”ဧရာဝတီ ထာဝရစီးဆင်းနိုင်ရေး”၊ ”မြစ်ဆုံရေကာတာ လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး”၊ ”မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအလိုမရှိ” စသည့်စာသားများကိုရေးသားပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဂဲနက်စ်က ”ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုက ဒီအချိန်မှာ ပိုပြီးမြင့်တက်နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကြာခင်မှာ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာရှစင်္ကြံစီမံကိန်းကိစ္စ တရုတ် ပြည်မှာ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဘာတွေ ပါလာမလဲဆိုတာ ထွက် ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ယူဆ တော့ ပြည်သူကနေပြီးတော့မှ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားဆန္ဒကို နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သိရှိစေဖို့အတွက် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြရန် မထွက်ခွာမီအချိန်တွင် လော်ဝေါ်ဇုန် နယ်အသင်းရုံး၌ ဟောပြောပွဲပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝါး ရှောင် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ Rev. တန်ဂွန်းက”မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆောက်မှ ဖွံ့ဖြိုးမယ်ဆိုရင် မဖွံ့ဖြိုး ချင်နေပါစေ။ ဒီထက်ပိုပြီး ဆင်းရဲ စရာအကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆင်းရဲပြီးသားပါ။ ဟိုအရင်ကတည်းက အခုအချိန်ထိ လည်း ဆင်းရဲပြီးသားပါ။ ကမ္ဘာမှာလည်း အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းမှာ အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မူ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ကြောင့်မချမ်းသာရင်နေပါစေအသက်မသေရင်ရပါပြီ”ဟုဆိုသည်။ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ရှစ်နှစ် ကျော်၊ ကိုးနှစ်ခန့် နိုင်ငံနှင့်အဝန်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိနေပြီး အစိုးရမှ ပြည်သူလူထု၏အပေါ် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကိုမူ အားရကျေနပ် မှုမရှိကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခံထားရသည့် ကျေးရွာမှ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ် သူဒေါ်လုရာက”ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကို အစိုးရက လက်ခံလက်မခံတာတော့သူတို့ အပိုင်းပေါ့။ ကျွန်မတို့ ကချင်လူထု တွေကော မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာကို အစိုးရ ကတော့ နားမကြားသလို၊ မျက်စိ မမြင်သလို၊ စာမတတ်သလိုပေါ့ ခံစားမိတယ်”ဟု ပြောသည်။
”ကြောက်စရာနဲ့ ဟာသနဲ့ကို တွဲဖက်ပြီး ရိုက်ရတာ နည်းနည်း ပိုခက်မယ်လို့ ထင်တယ်” ဒါရိုက်တာ မေဘရဏီ
ကာတာလိုးနီးယားဒေသကို လွတ်လပ်ရေးကြေညာ၊ စပိန်ဗဟိုအစိုးရက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရုပ်သိမ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ချေးငွေ အလွန်များပြားနေ၊ နောင်မှာ ယခုထက် ပိုအရေးကြီးသည့်